Dowladda Kenya Oo Mucaaradka ka Mamnuucday Mudaharaadyo Ay ka Dhigaan Sadax Magaalo Oo Waawayn. – Heemaal News Network
Dowladda Kenya Oo Mucaaradka ka Mamnuucday Mudaharaadyo Ay ka Dhigaan Sadax Magaalo Oo Waawayn.
October 12, 2017 Wararka Af Soomaliga Ah
Dowladda Kenya ayaa mamnuucday in dibadbaxyo lagu qabto gudaha saddex magaalo oo waaweyn oo kala ah caasimadda Nairobi, Kismu iyo Mombassa.
Wasiirka arrimaha gudaha Kenya, Fred Matiang’I, ayaa sheegay in mamnuuciddaasi looga golleeyahay in lagu badbaadiyo hantida iyo shacabka Kenya.
Taageerayaasha mucaaradka ayaa dibadbaxyo joogta ah ka dhigayay magaalooyinkani saddexda ah, waxaana inta badan dibadbaxyadaasi ka dhashay bililiqo iyo isku dhacyo dhex maray booliska iyo taageerayaasha mucaaradka oo dalbanaya isbadal dhanka doorashooyinka ah.
Hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa isaga haray tartanka doorashada loo ballansan yahay 26-ka bishan.
Maxkamadda ugu sarreysa Kenya ayaa laashay natiijada doorashadii dalka ka dhacday billowgii bishii siddeedaad, taa oo uu ku soo baxay madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Matiang’i ayaa sheegay in ujeeddada mamnuuciddan aysan ahayn in dadka loogu diido xaquuqdooda dastuuriga ah ee ay dibadbaxyada ku dhigi karaan balse tahay mid lagu heshiiyay kaddib markii mas’uuliyiintu ay arkeen haliska dalka ku soo wajahan.
Wasiirka ayaa shir jaraa’id ka sheegay in ay cabasho uga timid dadka gancsatada ah oo ka sheegtay saameynta xun ee ay dibadbaxyadu ku yeesheen gancsigoo
“Sidan kuma sii socon karno. Waa nasiib darro in aan aragno dadka oo gawaaridooda la burburinayo, hantida dadka oo la baabi’inayo iyada oo qiil laga dhiganayo dibadbaxyo nabdoon. Waa khasab in aan sharciga ilaalino,” ayuu yiri Matiang’i.
Waxa uu sidoo kale sheegay in saraakiisha sarsare ee mucaaradka ay qaadan doonaan mas’uuliyadda rabshadihii dhacay shalay oo arbaco ahayd.
Raila Odinga ayaa tartanka uga haray sababo uu ku sheegay in guddiga doorashooyinka uu diiday in ay wax ka qabtaan cabashooyin iyo dalab uu u gudbiyay oo ku saabsan khaladaadkii dhacay xilligii doorashadii hore.
Isbahaysiga mucaaradka ee NASA ayaa taageerayaashiisa ugu baaqay in ay dibadbaxyadaasi sii wadaan oo ay cadaadis saaraan guddiga doorashooyinka dalka ilaa ay ka ogolaadaan dalabka mucaaradka.
Masuuliyiintii Xisbiga Wadani Ee Wajaale Oo Iska Casilay Xubnimadii Kuna Biiray Xisbiga Kulmiye
Nuxurka Khudbadii Guddoomiye Xigeenka Wakiilada Axmed Yaasiin U Ka Jeediyay Xafladii Beesha Aadan Yoonis
Saraakiil ka Tirsan Booliiska Kenya Oo Maanta Lagu Dilay Magaalada Nairobi.
October 28, 2017 Caalamka
Labo sargaal oo katirsan booliiska dalka Kenya ayaa lagu dilay magaalada Nairobi, waxaana la sheegay in ay baxsadeen kooxihii hubeesnaa ee ka dambeeyay dilka saraakiishaasi. Dilka labadan sargaal ayaa saakay ka dhacay Xaafadda Kayole ee […]
Kenya Oo Gacanta ku Dhigtay Qaar ka Mid ah Ragii Weerarka ku Dilay Macalimiinta Wajeer.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen rag looga shakisan yahay in ay ka dambeeyeen dilkii Jimcihii ina dhaaftay iskuul ku yaalla magaalada Wajeera ee dalka Kenya loogu geystay ilaa Saddex […]
Ganacsatada Qaadka Ee Kenya Oo loo Ogolaaday inay Somaliland kala Hadlaan Ganacsigooda.
Ganacsatada Qaadka dalka Kenya ayaa sheegay in ay helleen ogolaasho ah in ganacsigooda kala xaajoon karaan maamulka Somaliland, sidoo kalena ay Qaadka geyn karaan deegaannada Somaliland. Guddiga Ganacsatada dalka Kenya ayaa sheegay in Wasaaradda arrimaha […]